Ihe ị ga-eme na Riga Obodo nke jikota ihe owuwu ohuru na nke ochie - Latvia - 1aviagem.com
Gara aga post: Banco Inter
Nkwupụta na-esote: Ndi Knights Templar dị?
Edebere 28 November 2019 Nyocha 2 site Römulo Lucena
Ọ dị mma, tupu ikwu maka Riga n'onwe ya, gịnị kpatara m ji kwụsị ebe ahụ?
N'ịchọ ịmara mba niile dị n'ụwa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala, ọtụtụ n'ime ha, Latvia bụ ọkara, ọkara bụ Latvia. N'agbata Estonia na Lithuania.😎
O juru m anya na ụgbọ elu ụgbọ ala ahụ dị ọnụ ala karịa nke ụgbọ elu si Tallinn n'oge ọ na-efu USD 7,00! Na ọpụpụ na Riga gaa Vilnius gbakwunyere USD 9,00. Nke ahụ bụ, Riga gosipụtara ịbụ nhọrọ dị mma (dịka ọ dị n'etiti) yana akụ na ụba maka ọnụego ego niile. Ya mere site na Tallinn ruo Vilnius (mkpokọta USD USD 16,00). Nke a na bọs nwere ihuenyo ntụrụndụ, kọfị, mmiri ọkụ, tii na mmiri! (dị mma karịa ụfọdụ ụgbọ elu dị ọnụ ala).
Ekwuputara m na atumatu m bụ ka m nwetatụ ezumike, ka emechara, njem njem bụ ọrụ chọrọ ume ike n'aka ndị na-eme. Achọrọ m ime nleta obodo na ọ bụ ya.
Ma mgbe ụlọ oriri na njegharị na-agagharị obodo ahụ, ọ tinyelarị m akwụkwọ. Ihe si n'ụlọ nkwari akụ ahụ pụta bụ àkwà mmiri Vansu (Vanšu) nke na-agafe osimiri Daugava.
Ihe Ncheta nke Ndị Fighter
na na nsọtụ enwere Ihe ncheta nke ndi agha ndi n’echebara ncheta ndi emeruru aru ma nwuru na osimiri Daugava 13 Jenụwarị 1905. Na nso okporo uzo ugbo ala. Aha na Latvian: Piemineklis 1905.
Ọ dị obere na foto ahụ, mana naanị ihe a na-ahụ anya dị ogologo karịa otu onye. Na ndabere nke foto dị n’elu, anyị na-ahụ akwa ụgbọ okporo ígwè.
Aka Ije ije:
Site n'ọnụ ụzọ mbụ ị ga-esi rute na Riga bụ akara ebe ncheta na ụlọ elu. Ebe ọ bụ na enwere ike iji ụkwụ mee njem dị ukwuu ma enwere ike iji ebe ndị a dị ka akara ala. Ọ dị mkpa imesi ya ike na okporo ụzọ Riga adịghị iche, na-eme atụmatụ nke ha.
Ya mere mkpa ihe ncheta dika akara. Na mgbakwunye, ụlọ elu ọ bụla nwere ọrụ na ịchọ ịmata ihe! Anaghị m egwu egwu, Riga nwere ụkpụrụ mmekọrịta na ihe owuwu dị iche iche m hụtụrụla! I gha emechaa akara “ihe ị gabigara” n’elu ụlọ. Ọmụmaatụ: akwa ụlọ, cat cat, n'elu ụlọ, elu ụgbọ, mgbịrịgba, okpukpu abụọ, okpukpu atọ, na ndị ọzọ.
Ọ ga-ekwe omume kaa akara site na agba na ụdị nke ụlọ ndị ahụ.
Ozo nke obe
Como nke abụọ M na-atụ aro ka ịzụta tiketi ụgbọ elu Hop-on Hop-off. Gịnị kpatara ya? Nwere ike iji ya dịka ụgbọ ala mpaghara ị ga-agagharị n’oge ike nke pass. You nwere ike ịzụta awa 24, ma ọ bụ elekere 48 wee banye ma banye n'ụgbọ njem ahụ ọtụtụ oge ịchọrọ. Mana ị ga-akpachara anya gbasara ụzọ ọ ga-aga. Busgbọ ala a nwere ụzọ abụọ agbakọtara na ụfọdụ nkwụsị. Uhie na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ dịkwa mkpa ị attentiona ntị na nhazi oge. N'ime mpempe akwụkwọ a na-enyefe ya, o nwere oge ọ na-agafe, ruokwa oge ọ na-agba. Banyere oge. Dịka m na-echeta, ụgbọ ala ahụ na-eme ngagharị ikpeazụ ya na nso 17: 00 awa. Mana nke ahụ nwere ike agbanweela. Ọ bụ ihe ihere, n’ihi na abalị na Riga bụ ihe ịtụnanya. Ma ọ bụrụ na ịmara ma ọ bụ ịchọrọ iji ụgbọ ala mpaghara, ọ ga-eme ka njem gị dị ọnụ ala karịa, ebe ụgbọ ala njem obodo na-adị ọnụ ala karịa oge ụgbọ ala mpaghara.
N’ezie na bọs ndị njem, ọ dị mfe ịchọpụta, yana ịmara ụzọ. Na mgbakwunye na audios na-ekwu ọtụtụ ihe banyere nlegharị anya. EỌ na - enye ọnụnụ ihe ruru n'asụsụ 10. Mana enweghị Portuguese. Ejiri m ụda ahụ na Bekee.
Site na etiti obodo ochie (Old Town) kedu ebe obodo anyị nọ.
dị nso na Ncheta Marines (Latvian Riflemen Ncheta) ndị bụ ụmụ nwoke 3 na ụdị ncheta Russia kachasị mma. Site ebe ahụ enwere ụgbọ ala njem nlegharị anya (ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ nke na-acha anụnụ anụnụ), yana ọrụ ndị njem nlegharị anya na ogige ahụ, na ụfọdụ ndị na-agagharị. Yabụ, nke a bụ ebe kacha mma ịmalite.
The square onwe ya ugbua na-agụnye ọtụtụ ihe na-eleta. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ iwu na onye ọ bụla chọrọ ịga obodo maka njem nlegharị anya.
N'ogbe ahụ, e nwere ụlọ Blackheads (ebe kachasị ama Riga). Ọ bụ n’akụkụ ihe ncheta a. Ọnọdụ a dị oke mma nke na o kwesịrị inwe ọkwa maka ya. M bu n’obi ime ya n’oge.
Ihe ozo dikwa nso nso a bu ulo elu ulo ahu bu ihe ewusiri ike na oge 13 ma nogide rue taa. Mana ọ ghọrọ ebe ngosi nka.
Katidral St. Peter, onye kachasị okenye n’obodo ahụ. sitere na narị afọ nke iri na itoolu. Ọ na-emezigharị ka ọ kwụ ọtọ. (akwa ụlọ).
Ma ebe ọ bụ oge ekeresimesi, anyị nwekwara ụdị okike ekeresimesi mbụ nke ụwa! Ee, nke ahụ bụ ihe ndị Latvia kwuru. Ọ dị na Latvia na Riga, na etiti etiti na ụbọchị sitere na 1510.
Akụkọ mgbe ochie nwere na ụfọdụ ụmụ nwoke gara butere nkụ n'ọhịa iji kpaa nnukwu ọkụ iji mee ka ọ dị ọkụ, ma ka ha na-enwetakwu nkụ, mkpụrụ osisi paini dị iche iche edobere maka iji mesịa. Mana umuaka ndi gbara gburugburu bidoro itu osisi a mgbe umu nwoke ndi ozo na acho ohia.
Mgbe ha laghachiri, ha hụrụ na osisi ahụ osisi ahụ ruru ụmụaka niile n'anya. Ike gwụkwara ha, ha dina n'akụkụ ya. Ha wee hụ kpakpando na-enwu na mbara igwe n’agbata alaka nke paini. N'ihi ya, ha kwụsịrị iji ya eme ihe dị ka ọkụ. Ma otu a kwa afọ n’oge a, ha na-ewetara osisi pine iji chọọ ya mma n'oge a.
Ọ bụkwa kemgbe ahụ ka emepụtara omenala a nke ịchọ mma osisi Krismas. A na-ebufe nke a site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ruo n'oge a.
Site na nke a ị nwekwara ike iwepu ebe ọkụ ọkụ si na Christmas. Kedukwa ihe kpatara o ji nwe ihe nnochi ọ bụla nke snow. Wetuo akụkọ a??
Na-eche na nke mbụ Christmas osisi fọrọ nke nta ghọọ osisi…
Ma pụọ ​​n'ụzọ square ahụ?
Can nwekwara ike ịhụ ụlọ nke Kremlin Riga, dịka ọ bụ akụkụ nke Soviet Union ma nọchitere anya otu n'ime ihe nchebe dị na Osimiri Baltic. Site n'ụzọ Kremlin pụtara ebe siri ike, ma ọ bụ ebe ewusiri ike. Ihe kacha mara amara bụ Moscow. (ma inwere ike lelee ndụmọdụ Moscow na njikọ a)
Redio na TV ụlọ elu.
I nwekwara ike ịga leta redio na igwe onyonyo. Ma na-ehie ụzọ na ọ na-akawanye karịa ka ọ dị. Enwere ike iji ya dịka nduzi dịka a na-ahụ ya site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile.
Ncheta Nnwere Onwe (Brīvības Piemineklis)
Ọ dị mma, n’ime ncheta niile nke a bụ ihe kachasị mkpa. Ihe ncheta nnwere onwe na-akọ akụkọ banyere Riga na nchịkọta. Na mgbe Soviet Union jikọrọ Latvia, ha nwara ịkwatu ihe ncheta ahụ ọtụtụ oge, n'ihi na ha kwenyere na ọ kpaliri ịhụ mba n'anya na Latvia. Ọ dị mma na Latvia bụ mba nwere onwe ha taa, yabụ anyị nwere ike ikwu na ha kwuru eziokwu. Ezi ihe ha apughi ibibi ya.
Ọ bụ ihe ncheta nke ihu ọ bụla nke polygon na-agwa otu akụkọ banyere Riga ruo mgbe nnwere onwe ya na usoro iwu ya bụ obodo nweere onwe ya.
Na ntọala anyị na-ahụ ụfọdụ Knights Templar, ndị na-arụ ọrụ, ndị edemede, ndị agha na agha ụwa nke mbụ na nke abụọ, mwakpo Sweden, mmeri nke Germany, njikọta ndị Russia, nnwere onwe na ngwụsị na nnwere onwe. Latvia nwere ndị agha tisasịrị ebe mmetụta nke ndị na-achị achị achịkọtara n'ụzọ dị ụtọ, yana mmezi nke ọtụtụ omenala mbụ (dị ka osisi Krismas). Ihe ọla kọpa na ọla nchara dị n’elu na-anọchite anya nnwere onwe ma na-eburu kpakpando atọ n’aka nke ọ bụla na-anọchi anya mpaghara atọ nke Latvia (Vidzeme, Latgale e Courland). Ihu ihu polygon ọ bụla nwere onyonyo dị iche. Ka ọ dị ugbu a ihe ncheta dị ka ebe a na-ezukọ maka nzukọ ihu ọha. Ọ bụkwa nnukwu nzukọ ebe nzukọ, n'ihi na nke 42 mita ya dị elu enwere ike ịhụ ya site na gburugburu ebe ndị gbara ya gburugburu. Na mberede enwere Ogige Bastejkalna mara mma nke ukwuu. Kedu nke haziri nke oma ma nwekwaa nlele anya anwu ututu.
Ka anyị kwuo na obodo ahụ na-agwakọta ihe owuwu narị afọ nke 13 ruo taa. Buildinglọ ọ bụla nwere ụdị nke ya, facade na ụdị ya.
N’ezie ịnụ ụtọ ụlọ nke isi obodo Art Nouveau bụ ihe na-atọ ụtọ ime. Dịka m si ghọta ya, ụdị a na-achọ n'ụzọ ziri ezi iji zere usoro akụkọ doro anya, mana akụkụ ndị ọzọ. Ọ chọrọ ịbụ ụdị “eziokwu” ma nwekwaa onwe ya, na-eweta ihe ndị ọzọ. Onye ọ bụla na-ese ụkpụrụ ụlọ na-eme ụdị nke ya. Mgbe ahụ enwere mkpọtụ na New Town nke bụ ezigbo asọmpi maka ụdị ọgụ dị iche iche na nke oke. Nke a bu Riga Polytechnic Institute, bu nke ghọrọ mahadum taa. Otu ọgbọ ụlọ ọrụ na-ebupụ ụdị ha na nghọta gburugburu ha na mpụga obodo. Riga mechara bụrụ obodo nwere nnukwu ọrụ Art Nouveau ije ụlọ ebe ọ bụla n'ụwa, na-ewugharị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụdị a. Yabụ na anyị nwere ike ikwu na Riga karịrị ọgbọ ochie na nke ọhụrụ. ma eleghị anya nke ahụ kọwara ihe kpatara na okporo ụzọ abụghị ihe myirịta. Gini mere n’agbanyeghi na ulo ndi ozo di iche iche, akuku uzo, ebe nri, ebe anyi na ha no kwekorita Ọ bụ ihe ngosi!
O nweghi ike iju osimiri Daugava n'onwe ya, nke bu osimiri Riga na ebe otutu agha di. Site n ’ụda bọs ahụ, anụrụ m na n’ala ala osimiri ahụ ga-abụ akụ nke otu n’ime Knights Templar onye jiri ụgbọ mmiri ya na ụfọdụ ụgbọ mmiri ya rute na nso Eze nke France. Wouldnye ga-enwe akụ a? Nwa tempulu, onye nwe ulo nke ndi ojii. Mana nke a bụ ihe ga-adịgide maka ọkwa na-abịa. Ka anyị na-alaghachi n'isi mmalite nke njem mbụ a site na Latvia!
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, hapụ nke ahụ ma soro anyị ka anyị ghara ịkọ ọzọ na ntanetị akụkọ na-esote. Naanị pịa bọtịnụ uhie ma banye email. 😎👉
Olee otú Art nouveau osisi ekeresimesi ndi isi ojii Knights Templar Daugava Latvia ncheta nnwere onwe njem mbụ Riga
2 comments	Hapụ okwu >
Pingback: Ndi Ndi Ngwunye Knights di? - 1aviagem.com
Pingback: Ajụjụ ọnụ a onye Brazil, kedu ka ahụmịhe nke mgbanwe? - Firenze - Italy - 1aviagem.com